साधारण लेखपढदेखि एसएलसी पाससम्मलाई नेपाली सेनामा भर्तिको अवसर, एकैपटक २१ सय ३५ जनशक्ति माग Bizshala - समाचार
भर्खरै धितोपत्र बोर्डलाई किन सार्वजनिक चुनौति दियो शिखर इन्स्योरेन्सले ?
एनआइडिसी बैंकमा भएको ७६ करोड अनियमितता अख्तियारले लुकाएको खुलासा
लिलामीमा सेयर फालाफाल, दोश्रो बजारको हुँदैछ बेहाल !
कोही नपुगेको ठाउँमा नेपाल टेलिकम, बाग्लुङको विकट स्थानमा मोवाइल सेवा
साधारण लेखपढदेखि एसएलसी पाससम्मलाई नेपाली सेनामा भर्तिको अवसर, एकैपटक २१ सय ३५ जनशक्ति माग
नयाँ जागिर 8 months ago Advertisement
बिजशाला 43 0
काठमाण्डौ । साधारण लेखपढ गर्न जान्नेदेखि ८ कक्षा र एसएलसी उत्तीर्णसम्मका लागि नेपाली सेनामा रहेर देशको सेवा गर्ने निकै ठूलो अवसर आएको छ । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डाले सोमबार विभिन्न पदहरुमा दरखास्त आह्वान गरेको हो । जंगी अड्डा काठमाडौंसहित विभिन्न पृतना, बाहिनी, गण तथा गुल्ममा विभिन्न पदमा गरी २१ सय ३५ जनाको लागि जागिरको अवसर खुलाइएको छ । सेनाले सैन्य अर्थात सिपाही पदमामात्रै १ हजार ९ सय ५० जनाका लागि जागिरको अवसर खुलाएको छ । यो संख्यामध्ये काठमाडौंको जंगी अड्डामा मात्रै ४ सय जना सिपाही भर्ति हुनेछन् ।
बन्दोबस्ती कार्य सिपाही, कुचिकार, लोहार, धोबी, केशकर्तक, वेटर र चर्मकर्मी पदका लागि साधारण लेखपढ गर्न जान्नेले समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी, सैन्य सवारी चालक, सैन्य पदमा ८ कक्षा उत्तीर्णले दरखास्त दिनसक्ने छन् । लेखा जम.क., सहायक पण्डित हुद्धा र अमल्दार कर्मचारी पदमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट १० कक्षा उत्तीर्णले आवेदन दिनसक्ने छन् । नेपाली सेनाका पृतना, बाहिनी, गण र गुल्मा रहेका क्षेत्रहरु, इटहरी, फिदिम, राजबिराज, हेटौंडा, सिन्धुली, रौतहट, रामेछाप, पोखरा, बझाङ, इलाम, बुटवल, लमजुङ, नेपालगञ्ज, दाङ, जुम्ला, जाजरकोट, दिपायल, धनगढी लगायतका क्षेत्रबाट दरखास्त फारम भर्नसकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । पूरा विज्ञापन हेर्न तलको फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् । Click to Zoom
nepal army new job Share this with your friends:
धितोपत्र बोर्डलाई किन सार्वजनिक चुनौति दियो शिखर इन्स्योरेन्सले ?
क्रूडको मूल्यमा भारि गिरावट, नेपालमा के प्रभाव पर्ला ?
आजदेखि मतदाता परिचयपत्र पाइने, ३ दिनमा ६४ लाख वितरण हुने
बायोडाटाबाट तु हटाउनुहोस् यी १० चिज, जागिर पाउने पक्का ! काठमाण्डौ । प्राय कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि व्यक्तिलाई जागिर... गुगल र फेसबुकमा खुल्यो जागिर, यसरी भर्ने आवेदन काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा राम्रो कम्पनी गुुगल र फेसबुकमा काम... कृषि बैंकले माग्यो एकसाथ ४० अधिकृत काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंकले एकैपटक ४० जना अधिकृत मागेको छ... इजरायलले माग्यो केयरगिभर, कस्तो योग्यता चाहिन्छ(सूचिसहित) ? काठमाण्डौ । नेपालीहरुका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक... नेप्सेमा काम गर्ने हो ? खुल्यो जागिरको अवसर काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा काम गर्न चाहनेका लागि जागिरको... रेडियो नेपालले खुलायो ९१ जनाका लागि जागिर काठमाण्डौ । रेडियो प्रसार सेवा समिति(रेडियो नेपाल)ले विभिन्न पदमा... कलाकारलाई स्थायी जागिरको अवसर, १० पासले पनि आवेदन दिन मिल्ने काठमाण्डौ । सांस्कृतिक संस्थानले स्थायी पदपूर्ति हुने गरी विभिन्न... उड्डयन प्राधिकरणमा १२७ का लागि जागिर खुल्यो काठमाण्डौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्थायी तथा करार सेवाका... Bizshala.com, operated by SOS Media Pvt. Ltd. is established in nepalese news industry asapioneer of online business, economic and financial news. Bizshala principally covers news regarding economic activity, financial statuatus, fluctuation, share market, currency, corporate, automobile industry and every other activities directly or indirectly related to economy. Dedicated to economic awareness and excellence.